निजी गाडीको आयातमा लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउन अध्यक्ष थापा सहित नाडाको दौडधूप, कहिले हट्ला प्रतिबन्ध ? - Safal Awaj Safal Awaj
काठमाडौं, ८ असार । निजी सवारीसाधनको आयातमा लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउन नाडा अध्यक्ष ध्रुव थापासहितको टोली दौडधूप गरिरहेका छन् । करिब ३ महिनादेखि निजी गाडीको आयातमा प्रतिबन्ध लागेपछि व्यवसाय नै धरापमा पर्ने चिन्तामा उनीहरू सरकारको ढोका ढकढकाइरहेका छन् ।
मंगलवार मात्रै पनि नाडा अटोमोबाइल्स एसोसियसन अफ नेपाल (नाडा)का प्रतिनिधि मण्डलले उद्योग मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडूसँग भेटवार्ता गरेका छन ।
अध्यक्ष ध्रुव थापाको नेतृत्वमा गएको एक प्रतिनिधि मण्डलले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूसँग यस्तो माग गरेको हो । सरकारले कार जीप र भ्यान जस्ता नीजि प्रयोजनका सवारी साधनहरुको आयातमा लगाएको प्रतिवन्ध खुला गर्न नाडाले माग गरेको हो ।
छलफलमा अध्यक्ष थापाले सरकारले देशको वर्तमान विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सुधार ल्याउन भन्दै निजी प्रयोजनका कार, जीप र भ्यानलाई आउदो आषाढ मसान्तसम्मको लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले एक सूचना प्रकाशित गरी आयातमा लगाइएको प्रतिवन्ध तत्काल खारेज गरी अटोमोवाइल व्यवसायीहरूलाई आफनो व्यवसाय गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न अनुरोध गरेका छन् ।
‘इतिहासमै पहिलोपटक गाडी व्यवसायमा यति ठूलो घाटा परेको छ,’ अध्यक्ष थापाले सफल आवाजसँग भने । थापाले देशलाई भन्सार विन्दुमा उठ्ने परल मूल्यभन्दा दोब्बर राजश्व बुझाउदै देशको कूल कर राजश्वमा झण्डै २५ प्रतिशत योगदान पुर्‍याएको बताएका छन् । सरकारको आयात प्रतिबन्धको नीतिले अटोमोबाइल व्यवसायीहरूको रोजीरोटी नै धरापमा पर्ने भन्दै नाडाले आयात खुलाउन माग गरेको हो ।
८० प्रतिशत भन्दा बढीले व्यवसायमा ह्रास
नाडाले विगत ८ महिनादेखि फाइनान्सको असहजता, एलसी मार्जिनमा गरिएको वृद्धि जस्ता कारणले अटोमोवाइल व्यवसायमा ८० प्रतिशत भन्दा बढीले ह्रास आएको जनाएको छ । रास्ट्र बैंकको नितिका कारण अटाे ब्यबसाय यसरी प्रभावित बनेको नाडा अध्यक्ष थापाले बताए । साथै अटाे क्षेत्रमा रोजगारी गरिरहेका लाखौं व्यवसायीको रोजिरोटीमा नै समस्या पर्न लागेको समेत बताए ।
उनले भने, ‘खर्बौँको लगानी तथा लाखौँलाई रोजगारी प्रदान गरेका व्यवसायीहरू अहिले धरासायी हुने अवस्थामा पुगेका छन्, यस बिसयमा सरकारले छिटो निकास दिनु पर्छ ।’
भन्सारमै थुप्रिए गाडी
अध्यक्ष थापाले अहिले इण्डियन नाकामा ४ हजार ५ सयभन्दा बढी गाडी थुप्रिएको बताए । यतिमात्र नभएर नेपाली नाकामा पनि १५ सयभन्दा बढी गाडी थुप्रिएको उनको भनाइ छ ।
उनले सरकारको नीतिका कारण अटोमोबाइल्स व्यवसायीहरु निकै ठूलो समस्यामा रहेको जिकिर समेत गरे ।
थापाले भने,’कति बुकिङ गरेको गाडी बेच्नका लागि ल्याउन पाइएको छैन, कति नाकामै बसेका छन्, यहीँ पनि कति गाडीको स्टक रित्तिएको अवस्था छ, क्षति ठूलो व्यहोरिरहेका छौं ।’
उनका अनुसार अहिले टाटा, हुण्डाई,टाेयाेटा, फाेर्ड लगायतका गाडीहरूको स्टक नै नेपाली बजारमा सकिएको बताए । यसले गर्दा व्यवसायीमात्र नभएर ग्राहकलाई पनि समस्या भएको उनको बुझाइ छ । कोरोना महामारीको समयमा व्यवसायमा धेरै असर नपरेको भएपनि अहिले सरकारको नीतिका कारण समस्या भएको सुनाए ।
प्रतिबन्ध खुलाउन अध्यक्ष थापाको सक्रियता
अध्यक्ष थापा सरकारले निजी सवारीसाधनको आयातमा लगाएको प्रतिबन्ध खुलाउन सक्रिय भएर लागेका छन् । प्रतिबन्ध खुलाउनका लागि सम्बन्ध निकायहरुसँग औपचारिक तथा अनौपचारिक छलफल तथा आग्रह उनले गरिरहेका छन् । मंगलबार मात्रै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र बडूसँग नाडा प्रतिनिधि मण्डलले भेटेको छ ।
यसबाहेक प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री तथा गभर्नर लगायतलाई थापा नेतृत्वको नाडा प्रतिनिधि मण्डलले पटकपटक भेटेर निजी गाडी आयातमा लगाइएको प्रतिबन्ध खुला गर्न आग्रह गर्दै आएका छन् ।
नाडा अध्यक्ष ध्रुव थापा
साउनबाट हट्ला छ प्रतिबन्ध ?
करिब ८ महिना अघिदेखि सरकारले निजी सवारीसाधन आयातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि व्यवसायीहरुले ठूलो नोक्सानी व्यहोर्नु परेको नाडाको भनाइ छ । क्षतिको लेखाजोखा नै गर्न सकिने अवस्था नभएको अध्यक्ष थापा बताउँछन् ।
उनले भने,’कति बुकिङ गरेको गाडी बेच्नका लागि ल्याउन पाइएको छैन, कति नाकामै बसेका छन्, यहीँ पनि कति गाडीको स्टक रित्तिएको अवस्था छ, क्षति ठूलो व्यहोरिरहेका छौं ।’
आर्थिक संकटका कारण आयातमा रोक लगाइएको निजी सवारीसाधनको आयातमा प्रतिबन्ध साउन १ गतेदेखि भने हटाउने उद्योग मन्त्रालयको तयारी छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, अहिले कुन तरिकाले निजी सवारी साधनको आयात खसला गर्ने भन्ने विषयमा छलफल चलिरहेको छ ।
यता मन्त्री बडूले नाडा प्रतिनिधि मण्डललाई साउनदेखि प्रतिबन्ध हट्ने आश्वासन दिएका छन् । मन्त्री बडूले नाडाको टोलीसँग कार जीप र भ्यान जस्ता निजी सवारी साधनहरूको आयातमा लागेको प्रतिवन्ध आषाढ मसान्तसम्मको लागि मात्र भएकोले धैर्य गर्न अनुरोध गरेका थिए ।
छलफलमा मन्त्री बडूले साउनदेखि प्रतिबन्ध लगाउने तयारी नभएको र असार मसान्तबाटै प्रतिबन्ध हटाइने बताएका हुन् ।